I-CASA RAINA, istudiyo esiluhlaza entliziyweni yeBlloku
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguArber
ICasa Raina sisitudiyo esisembindini wekota yeBlloku. Yenye yestudiyo sam ezi-3 / igumbi. Imalunga ne-40 m2 kwaye inegumbi lokulala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela kunye nebalcony.
Igumbi libanzi ngokwaneleyo ukuba abantu aba-2. Ibalcony inika ithuba lokuba ube nomoya omtsha kwaye ube nesiselo okanye ikofu ngaphandle. Inomnyango odibanisa zontathu izitudiyo/igumbi. Ke umnyango wayo westudiyo ngomnyango wabucala. Kukho isitshixo sesitshixo emnyango esisebenza ukuqokelela isitshixo ekufikeni kwakho, naxa ndingekho. Oku kwenza ukuba ufike naliphi na ixesha emva kokungena kwaye ushiye naliphi na ixesha ngaphambi kokuba uphume.
Inoqhagamshelo lwe-intanethi oluyi-100 MB, kukho i-air conditioned, i-smart TV kunye nazo zonke ezinye izinto eziluncedo ozifunayo ngexesha elifutshane okanye eliphakathi.
4.92 ·Izimvo eziyi-72
Isitudiyo sisentliziyweni yeBlloku, eyona ndawo idumileyo kunye neyona ndawo ibalaseleyo yaseTirana. Ikwisakhiwo esinye sendawo yokutyela ethi "A la Santé". Zonke izinto ezinomtsalane zihamba nge-10 min ukusuka apho.
Umbuki zindwendwe ngu- Arber
Undwendwe lungaqhakamshelana nam nangaliphi na ixesha ngawo nawuphi na umbuzo okanye ingcebiso. Ndiyathemba ukuba luncedo ngalo lonke ixesha ekunikeni iingcebiso kunye neengcebiso malunga neTirana, iAlbania kunye nezinye izinto ngokubanzi